The Cisco I-Nrite Finals! | Martech Zone
Wednesday, May 7, 2008 Wednesday, October 29, 2014 Douglas Karr
My otu ezi ndị enyi, Jason, Bill, Carla na m ụgbọala Cincinnati ụnyaahụ n'ihi na anyị I-Nrite onyinye ikpeazụ ya na Cisco. Facilitylọ ọrụ Carmel dị nso karị mana Cisco chọrọ ịkwaga anyị iji mee ka ndị Innovation ha zuru ezu nọrọ.
N'ime ihe karịrị 1100 ntinye mba ụwa na asọmpi ahụ, a hoputara anyi ma mee 32 ọkara-ikpeazụ. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime echiche iri na abụọ ikpeazụ na-eweta n'ihu otu bọọdụ bidoro asọmpi ahụ. Enweghị nrụgide, ọ bụ?
Enweghị m ike icheta otu ndị di na nwunye ga-eso rụọ ọrụ a. Ihe na-eju anya, bụ n'ezie, bụ mgbe ị họpụtara otu ndị ọrụ ike… anyị niile nwere ọrụ ịma aka. Onyinye-A na-agbakwunye na ọrụ anyị ma enwere m ekele na m nwere ndị enyi ga-agbago mgbe m na-enweghị ike. You ga - ahụrịrị na nsogbu ahụ na - ahapụ ahụ anyị ma ọchị na - alọghachi mgbe anyị mechara ngosi ahụ.
Ihe nlele vidiyo nke Telepresence dị na Youtube mana ọ naghị enye ahụmịhe zuru oke.
Ime ụlọ ahụ bụ tebụl oval dị na ihu nke na-eche ihu ihu atọ buru ibu na igwefoto vidiyo dị n'ime ya. Mgbe ị gbanyere laptọọpụ gị iji mee ihe ngosi gị, a na-atụgharị ya na mpaghara n'okpuru ngebichi yana nke ọma n'okpuru ihuenyo ka ndị otu niile nwee ike ịhụ ya.
Anyị nwere nnọkọ na ebe ekwenti ekwentị atọ dị na nzukọ anyị yana onye ọzọ na-akpọ oku ịtinye. Usoro ahụ na-atụgharịrị ozugbo na onyonyo dabere na ebe a na-ekwu okwu. Mana ọ naghị atụgharị ihuenyo niile - ọ na-atụgharị na ihuenyo mmadụ na-ekwu okwu. Nke a bụ nnukwu eserese ebe teknụzụ na-arụ ọrụ n'aka ekpe nke otu San Jose - ị ga-ahụ ọkara ya.
N’ime nkeji ole na ole iji sistemu a, ịchefuru n’ezie na ị nọ na nsọtụ obodo a. ọ bụ ihe oke itunanya ahụmahụ. Obi tọrọ anyị ezigbo ụtọ.
The Cisco Otu
Site na obi na-ada ụda na ọtụtụ ndị isi na Cisco, agbalịrị m idetu aha onye ọ bụla mana m furu efu. Ọ bụ ihe obi ụtọ iso na ihu Marthin De biyama! Ndị otu Cisco ahụ bụ ndị nkịtị, na-eme amara, na-anabata ma na-akwado ndị ọbịa. Egwu ọ bụla nke Randy, Paula na Simon kwụsịrị ngwa ngwa ndị otu ndị ndu anyị nwere n'ihu anyị!
Zuru! Olee otú Ngosipụta ahụ si gaa?
Gbalị ire otu ijeri dollar na nkeji iri isii bụ n'ezie ahụmịhe ọhụụ. Bill bụ ọnụ na-ekwuchitere anyị na nwoke ahụ debere oge nzukọ ahụ. Achọpụtara m ọtụtụ data ụlọ ọrụ na ahụmịhe m nwere ike. Anyị maara na nsogbu kachasị sie ike na-eme ka ndị otu ahụ mata azịza na ohere. Carla gosipụtara ihe ngosi slide anyị ka anyị wee weghara mkpọm data nke anyị juru n’ime slide ọ bụla.
Nwere ike N'ezie?
Mgbe ị na-ekwu usoro "Point of Sales", folks ozugbo na-eche banyere a barcode nyocha, ihe ndị yiri nkata nchekwa data, na ike ibipụta a nnata na-akwụ ụgwọ a kaadị. Nke ahụ bụ ụkpụrụ nke anyị ga-agbanwe na 30 mbụ!
We nwere iji mee ka ndi otu a mata na POS nwere otutu ihe karie ka ha buru ebe ahia a nwere ohere iji tinye onu ahia ndi ozo ịtụ, wireless ịtụ, akuko, enterprise management, wdg
Ihe mere ndị mmadụ ji ahụ POS dị ka 'ndekọ ego dị ebube' bụ na nke a bụ kpọmkwem ihe ọ bụ afọ 50 gara aga na obere mgbanwe. Isi echiche anyị maka njedebe bụ ime POS HUB nke ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, yana netwọọdụ echedoro ma nwee ntụkwasị obi iji kwado nkwukọrịta ọ bụla.
Ikekwe akụkụ kachasị mma nke ngosi ahụ bụ na, ka anyị na-ekwu okwu, anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ anụ ahụ na ihu ha gbanwere na bọlbụ ọkụ na-agbanye. Ajuju gbanwere site na 'onye, ​​gini, ole' ka 'olee otu, ihe osise, gini kpatara na'. Site na ụlọ ọrụ $ 17B, atụmanya ndị na-emechu ihu na onyinye ndị dị ugbu a, ọ nweghịkwa onye na-ere ahịa na-abanye na efere - ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ isụ isụ na-ebute ọgba aghara site na ụlọ ọrụ nwere akụ nke Cisco.
Ka ọ na-erule nzukọ ahụ, anyị nwere mkparịta ụka maka ndị ahịa dị ụgbụ na-ebugharị na ebumnuche nke "talọ oriri na ọtaụ inụ n'ime igbe" yana njikọta na ndị ahịa ahịa agnostic POS. Ee !!!! Nke ahụ bụ foto anyị chọrọ ite oge niile. Anyị nwere ụfọdụ ezigbo nzaghachi site na otu, ụfọdụ ezigbo onwu n'oge niile, anyị mechiri nzukọ ahụ. Jason mere ka nzukọ ahụ kwụsị ime ka ndị otu mara ihe kpatara sistemu ga-eji dị oke mkpa maka ọganiihu ya dịka onye na-eme ụlọ oriri na ọteụ .ụ.
Ekwetaghị m na ọ ga-aka mma! E nwere nyocha / ụgwọ / uru ọzọ enwere ike ịrụ na anyị amata ihe ndi ozo iji nweta ozi ahụ iji nụchaa ikpe azụmahịa anyị. Onu ogugu puku dolla na akuko banyere ulo oru gha achoputa ya site n’aka onye nyocha ya nke oma weputa ezi okwu.
Ugbu a, anyị na-eche! Marthin mechiri nzukọ ahụ site na nkwupụta nke etu o si atọ ụtọ ịnụ echiche ndị ọzọ banyere ihe Cisco 'bụ' ma ọ bụ 'mere'. Anyị nwere olile anya na ha nwere ike iji anya nke uche ha hụ oghere a. Nke a ga - eme ka Cisco sie ike dịka ndabere data azụmaahịa, nke izizi na ngalaba ọrụ nri, ma gafee ụlọ ọrụ azụmaahịa niile.
Ndị otu ahụ mechara kpọọ ekwentị wee rụọ ọrụ nkeji iri atọ. Anyị na-eche ruo ọnwa June ịnụ ihe ga-esi na ya pụta! Tinye akà rà… tinye akọrọ… tinye…
Ọ bụrụ na Cisco ahọrọghị anyị, anyị atụlelarị echiche a na ụfọdụ ndị ọchụnta ego, ndị mmụọ ozi na ndị isi ike na mpaghara ebe a. Enweghị Cisco netwọk na iru, nke a nwere ike ịbụ a siri ike echiche na-ere. Nke ahụ bụ, belụsọ na anyị nwetara ego wee bụrụ onye ahịa ha!
Tags: onyinye Ciscocisco iprizetelepresence
Mee 7, 2008 na 10: 34 AM
Anyị nwere obi ụtọ na anyị nwere ike ịkọgara otu nnukwu ìgwè nke ndị ọrụ Cisco na Geoffrey Moore. (Onye edemede nke “Crossgafe Nsogbu ahụ: Marketingzụ ahịa na ire ere ngwaahịa nke ọgbara ọhụrụ na ndị ahịa ahịa Mainstream” na onye nwe Chasm Group.)
Ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche, enwere m obi ụtọ maka ọrụ ndị otu anyị mepụtara. Daalụ, Carla, Doug na Jason !!